Ajọ Ifufe Katrina, otu n'ime ihe kachasị njọ na akụkọ ntolite anyị na nso nso a. Netwọk Mgbasa Ozi
Ajọ Ifufe Katrina, otu n’ime mbibi kachasị na akụkọ ntolite anyị nso nso a
Ajọ Ifufe Katrina, dị ka nke NOAA ji aga GO-12.
Ihe gbasara mbara igwe bu ihe ndi n’emebi ihe, ma odighi ka ihe ndia Ajọ Ifufe Katrina. Ọ dịkarịa ala mmadụ 1833 nwụrụ site na ajọ ifufe ahụ n'onwe ya ma ọ bụ idei mmiri nke so ya, na-eme ka ọ bụrụ nke kachasị njọ n'oge 2005 ajọ ifufe nke Atlantic na nke abụọ na akụkọ ntolite US, na-esote naanị San Felipe II, 1928.
Ma, Kedu ebe mmalite na ebugharị nke ajọ ifufe a dị ike nke, naanị site n'ikwu aha ya, ihe oyiyi mbibi ọ hapụrụ na United States na-abata n'uche ozugbo?
1 Ajọ Ifufe Katrina akụkọ ihe mere eme
2 Kedu ihe ndị emere iji zere mmebi?
3 Kedu mmebi o mebiri?
3.1 Onye nwuru anwu
3.2 Mmebi ihe
3.3 Mmetụta gburugburu ebe obibi
3.4 Mmetụta na ọnụọgụ mmadụ
4 Ewere usoro kwesịrị ekwesị?
Ajọ Ifufe Katrina akụkọ ihe mere eme
Ikwu maka Katrina bu ikwu banyere New Orleans, Mississipi, na obodo ndi ozo tara ahuhu site na oke ikuku a. Ọ bụ ajọ ikuku nke iri na abụọ guzobere n'oge ajọ ifufe nke afọ 2005, kpọmkwem na August 23, na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Bahamas. Ọ bụ nsonaazụ nke njikọta nke ebe okpomọkụ na Tropical Depression Diez, nke emere na August 13.
Usoro a ruru ọnọdụ oke ifufe nke ebe okpomọkụ naanị otu ụbọchị mgbe e mesịrị, n'August 24, ụbọchị a ga-akpọ ya Katrina. Jectzọ traktị sochirinụ bụ ihe ndị a:
August 23: na-aga n'akụkụ Hallandale Beach na Aventura. Mgbe ọ rutere na mmiri, ọ dara mba, mana otu awa mgbe nke ahụ gasịrị, mgbe ọ banyere n'Ọwara Oké Osimiri Mexico, ọ gbasiri ike ọzọ ma weghachite ọnọdụ ajọ ifufe ya.
August 27O ruru ụdị 3 na Saffir-Simpson, mana ntụgharị nke mgbidi anya mere ka ọ okpukpu abụọ. Nke a na-eme ngwa ngwa bụ n'ihi mmiri na-enweghị atụ, nke mere ka ifufe fee ngwa ngwa. Yabụ, n'echi ya ọ ruru ụdị 5.
August 29: Mere ala ọdịda nke ugboro abụọ dị ka ajọ ifufe Atọ 3 dị nso na Buras (Louisiana), Breton, Louisiana na Mississipi nwere ifufe nke 195km / h.
August 31: ọ na-agbada na ndagwurugwu nke ebe okpomọkụ dị nso na Clarksville (Tennessee), wee gaa n'ihu n'okporo Osimiri Ukwu.
Ka oge na-aga, ọ ghọrọ oke mmiri ozuzo na-aga ebe ugwu ọwụwa anyanwụ ma metụtara ọwụwa anyanwụ Canada.
Kedu ihe ndị emere iji zere mmebi?
Hurlọ Ajọ Ifufe Mba (CNH) nyere ndị nche hurricane maka ndịda ọwụwa anyanwụ Louisiana, Mississipi na Alabama na August 27 mgbe enyochachara ụzọ nke ajọ ifufe ahụ ga-eso. N’otu ụbọchị ahụ, ndị na-eche nche n’ụsọ Oké Osimiri United States mere ọtụtụ ọrụ nnapụta site na Texas ruo Florida.
Onye isi ala nke United States n'oge ahụ, George W. Bush kwupụtara ọnọdụ mberede na Louisiana, Alabama na Mississippi na August 27. N'ehihie, CNH nyere ịdọ aka ná ntị ajọ ifufe maka agbatị ala dị n'etiti Morgan City (Louisiana) na ókè ala n'etiti Alabama na Floridaawa iri na abụọ mgbe ịdọ aka ná ntị mbụ.
Ruo oge ahụ, ọ nweghị onye nwere ike ịma etu Katrina ga-esi bụrụ mbibi. Akwụkwọ akụkọ sitere na New Orleans / Baton Rouge ụlọ ọrụ nke National Weather Service dọrọ aka na ntị na mpaghara a nwere ike ịbụ ebe obibi izu.. Na August 28, Bush sooro Gọvanọ Blanco kwurịtara maka ịkwado ịpụpụ ya na New Orleans.
Na mkpokọta, ụfọdụ mmadụ 1,2 si Gulf Coast yana ọtụtụ n'ime ndị nọ na New Orleans ga-akpọpụ.
Kedu mmebi o mebiri?
Nke a bụ otu esi ahapụ Mississipi mgbe oke ifufe ahụ gasịrị.
Onye nwuru anwu
Ajọ Ifufe Katrina gburu 1833 mmadụ: 2 na Alabama, 2 na Georgia, 14 na Florida, 238 na Mississipi na 1577 na Louisiana. Na mgbakwunye, enwere 135 na-efu efu.
na ndịda Florida na Cuba enwere mmebi e mere atụmatụ na ihe ruru ijeri dọla abụọ, ọkachasị n'ihi idei mmiri na osisi ndị gbadara agbada. E nwere oke mmiri ozuzo na Florida, na 250mm, na Cuba, na 200mm. Ide mmiri juputara na obodo Batubanó nke ndị Cuba.
En Louisiana oke mmiri ozuzo dịkwa oke ike, site na 200 ruo 250mm, nke mere ka ọkwa Ọdọ Mmiri Pontchartrain gbagoo, nke mejupụtara obodo ndị dị n'etiti Slidell na Mandeville. E bibiri I-10 Twin Span Bridge, nke jikọtara Slidell na New Orleans.
En New nye ya ntụziaka mmiri ozuzo zosiri ike nke na ọ fọrọ nke nta ka mmiri tochie obodo ahụ dum. Ọzọkwa, Katrina kpatara mmebi iwu 53 na usoro levee nke chebere ya. Okporo ụzọ ndị ahụ enweghị ike ịnweta, belụsọ maka Njikọ Obodo Crescent, yabụ ha nwere ike ịhapụ obodo maka ya.
En Mississipi, kpatara mbibi e mere atụmatụ na ijeri dollar na àkwà mmiri, ụgbọ mmiri, ụgbọ ala, ụlọ na piers. Oké ifufe ahụ tiwapụrụ ya, na-ebute mpaghara iri asatọ na-ekwupụta ọdachi na mpaghara mpaghara enyemaka gọọmentị etiti.
na Ebe ọwụwa anyanwụ US Edere ifufe nke 107km / h na Alabama, ebe oke mmiri ozuzo anọ mekwara. Agwaetiti Dauphin mebiri emebi. N'ihi ajọ ifufe ahụ, a kwụsịrị ime osimiri ndị ahụ.
Ka ọ na-aga ebe ugwu ma na-ada mbà, Katrina ka siri ike iji bute idei mmiri na Kentucky, West Virginia, na Ohio.
Na mkpokọta emebiri ihe onwunwe na $ 108 nde.
Mmetụta gburugburu ebe obibi
Mgbe anyị na-ekwu maka ajọ ifufe anyị na-echekarị maka mmebi ha na-eme n'obodo na obodo nta, nke bụ ihe ezi uche dị na ya ebe ọ bụ na anyị na-eme ndụ anyị na ebe ndị ahụ. Agbanyeghị, ọ na - eme oge ụfọdụ na otu n’ime ihe ịtụnanya ndị a na - ebute mmebi dị egwu na gburugburu ebe obibi. Katrina sokwa na ha.
Ebibiwo ihe dị ka 560km2 nke ala na Louisiana, dị ka ya si kwuo Nnyocha nyocha ala United States, ebe ufodu enwere pelicans aja aja, mbe, azu na otutu umu anumanu. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana a ga-emechi ihe mkpuchi mba anụ ọhịa iri na isii.
Na Louisiana, enwere mmanu mmanu na ulo oru iri anọ na ano na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ, nke sụgharịrị gaa lita 26. A na-achịkwa ọtụtụ n'ime ha, mana ndị ọzọ ruru usoro okike na obodo Meraux.
Mmetụta na ọnụọgụ mmadụ
Mgbe nri na mmiri kọrọ gị, ị na-eme ihe ọ bụla iji nweta ya. Ma ọ bụghị naanị gị ga-ezu ohi ma zuo ohi - yabụ ndị na-eme ihe ike. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere na United States. United States National Nche debe ndị agha 58.000 iji gbalịa ịchịkwa obodo, ọ bụ ezie na ọ dịghịrị ha mfe: ọnụ ọgụgụ igbu ọchụ site na Septemba 2005 ruo February 2006 toro site na 28%, na-egbu 170.
Ewere usoro kwesịrị ekwesị?
Lọ mebiri emebi na Florida mgbe Ajọ Ifufe Katrina gasịrị.
Enwere ndị na-eche nke ahụ Gọọmentị United States emeghị ihe niile enwere ike iji zere mfu mmadụ. Onye na-eme ihe nkiri Kanye West na egwu egwu nke NBC kwuputara o kwuru na "George Bush achọghị ịma maka ndị isi ojii." Onye isi oche mbụ zara ajụjụ a site n'ikwu na nke a bụ oge kachasị njọ nke onye isi ala ya, na-ebo onwe ya ebubo na-ezighị ezi banyere ịkpa ókè agbụrụ.
John prescott, onye bụbu osote onye isi ala nke United Kingdom, kwuru na »oke egwu idei mmiri na New Orleans na-ewetara anyị nso na nchegbu ndị isi nke mba dị ka Maldives, ndị mba ha nọ n'ihe ize ndụ nke ịla n'iyi kpamkpam. United States alawo azụ na usoro Kyoto, nke m na-atụle ihie ụzọ.
N'agbanyeghị ihe mere, ọtụtụ mba chọrọ inyere ndị lanarịrị Katrina aka, ma ọ bụ ziga ha ego, nri, ọgwụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ha nwere ike. Enyemaka mba ụwa dị ukwuu nke na nde dollar 854 ha natara, naanị 40 ka ha chọrọ (ihe na-erughị 5%).
Ajọ Ifufe Katrina hapụrụ akara ya na United States, mana echekwara m ntakịrị na anyị niile. Ọ bụ otu n'ime ihe nnọchianya kachasị mkpa nke ike nke okike. Ọdịdị nke dị, na-elekọta anyị ọtụtụ oge, na mgbe ụfọdụ na-anwale anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ajọ Ifufe Katrina, otu n’ime mbibi kachasị na akụkọ ntolite anyị nso nso a
Kedu usoro mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe a na-ewere na Europe?
United States nwere ike ịnwe mmụba nke 2ºC tupu ụwa ndị ọzọ